Ururka macalimiinta ee KNUT oo walaac ka muujiyay miisaaniyada loo qoondeeyay waxbarashada – Star FM Kenya
April 10, 2017 starfmke 0 Comment
Ururka qaran oo ay ku bahobeen macalimiinta dalka ee loo soo gaabiyo KNUT ayaa dowlada ku eedeeyay in ay mudanaanta koowaad siisay sidii qalabka kompiyutarada loogu soo iibin lahaa ardayda marka la barbardhigo in barayaal badan la shaqaaleysiiyo.
Xoghayaha guud ee ururka KNUT Wilson Sossion ayaa ka dhawaajiyay in ay tahay arrin anan si gaar ah loo eegin baahida jirta ee ah gabaabsiga macalimiinta.
Waxaa uu intaas ku daray in miisaaniyad sanadeedka 2017- 2018-ka oo maalmo ka hor lagu dhawaaqay lacag dhan 13 biliyan loo qoondeyay in ardayda loogu soo iibiyo kompiyuutara halka 2 bilyan oo shilin keli loo loo qoondeeyay in lagu shaqaaleysiiyo macalimiin ay 5000 tiradoodu gaareyso .
Xoghayaha ayaa xusay in ka urur ahaan ay dalbanayaan in la shaqaaleysiiyo in ka badan 70,000 oo ah barayaal la soo tababaray balse anan weli ay shaqa la’aan haysato.
Dowlada ayuu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga baahanyahay in lacagta ay u qoondeysay qalabkaasi ay u weeciso in macalimiin dheraad ah lagu howlgeliyo.
Mr Sossion oo ka dhawaajiyay in arrintaasi ay suurta gal tahay ayaa tusaalo u soo qaatay dowlada Hindiya oo uu sheegay in lacago loo qoondeeyay in ardayda qalab ay wax ku bartaan loogu soo iibiyo markii dambe loo adeegsaday in macalimiin la shaqaaleysiiyo
← UNHCR oo sheegtay in 2000 oo soomaali ah oo ay abaarta saameysay ay soo gareen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
Madaxweynaha Masar oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah →
Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka oo ka hadlay caqabadaha hor taagan is dhex galka bulshada bariga Africa
September 6, 2016 starfmke 0
Arday lagu soo oogay dacwad la xiriirtay weerarkii lagu qaaday masaajid ku yaalo Kanada
Sarkaal ka tirsan booliska oo lagu dilay Nairobi
November 30, 2016 starfmke 0